Accueil > Newsletters > Filazam-baovao faha-108
« Newsletter n° 106 [ENG]
Newsletter n° 109 »
publié par Admin 2, le lundi 3 décembre 2018
Ny talata 6 Novambra, nandritra ny Herinandro Afrikanan’ny Solika izay natao ny 5 ka hatramin’ny 9 Novambra 2018 tany Cape Town, Afrika Atsimo, no nanambaran’i Ramatoa Voahangy Nirina Radarson, Tale Jeneralin’ny OMNIS (Biraon’ny Harena an-kibon’ny tany Nasionaly sy ny Indostria Stratejika) ny fanokafana ny tsingerina fanomezana fahazoan-dàlana hikaroka solika any an-dranomasina eto Madagasikara (ouverture du cycle de licences d’exploration pétrolière offshore) amin’ny alàlan’ny fiombonana antoka sy fiaraha-miasa amin’ny orinasa manam-pahaizana amin’ny lafiny « sismika » (horohoron-tany) TGS sy BGP.
Ny tohin’io fanambarana io, dia hiroso amin’ny fanomezana « titra » momba ny solika izay mpandraharaha liana amin’izany eo amin’ny faritra misy solika sy etona 44 izay hirefy 1.940 km² tsirairay avy ny OMNIS, ka ahatratra 63,296 km² ny fitambarany. Ary mandritra ny fe-potoana fisokafan’nyantso ho an’ny fanomezandàlana nanomboka ny 7 novambra 2018 ka hatramin’ny 30 May 2019, dia miroso amin’ny fanatanterahana asa fanentanana eran-tany (roadshow) ny OMNIS mba hampisehoana ireo faritra misy solika sy etona, hisintonana ny mpampiasa vola ary hanamaroana ny safidy.
Ity asa fanentanana mikendry ny fanomezana alàlana maro ity dia manahiran-tsaina amin’ny lafiny samihafa. Voalohany, mahonena ny tsy fisian’ny mangarahara manodidina ny fandraisana fanapaha-kevitra hisy fiantraikany mavesa-danja toy izao, na dia eo aza ny filazan’ny Minisitra misahana ny harena ankibon’ny tany sy ny solika, fa mivoy ny fitantanana tsara ny harena an-kibon’ny tany sy ny fampandraisana anjara ny rehetra tsy ankanavaka izy. Tsy fantatra mihitsy ohatra ny tanjona ara-toekarena sy ara-politika kendren’ny mpanapa-kevitra amin’ny alàlan’ireo fanomezan-dàlana/ alàlana hikaroka ireo, hampisongadina ary hamokatra etona sy solika.
Ankoatr’izany, tsy fantatra raha nisy fanombanana stratezika ny fiantraikan’ny tetik’asa amin’ny lafiny aratontolo iainana ara-stratezika (évaluation environnementale stratégique) talohan’ny nandraisana ity fanapahan-kevitra ity. Io fanombanana ioa nefa dia novolavolaina mba hampiditra ny lokan’ady sy fepetra tokony ho raisina ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ao amin’ny zotra mikasika ny fandraisana fanapahankevitra, amin’ny alalan’ny fahafantarana sy famaritana mialoha ny olana sy ny fomba samihafa mety hizorana. Marihina mantsy fa ny fikarohana sy fitrandrahana solika sy etona anaty ranomasina amin’ireo faritra midadasika ireo dia manohitra mivantana ny tanjona fiahiana ny loharanon-karena andranomasina sy ny fiarovana ary ny famerenana amin’ny laoniny ny tontolo iainana an-dranomasina izay iankinan’ny antom-pivelomana sy ny antoka ara-sakafon’nyampahany lehibe eo amin’ny vahoaka malagasy, sy ny fampandrosoana ny sehatra maro hafa mampiasa ny harena ara-java-boahary anatin’ny ranomasina.
Ankoatry ny loza lehibe mitatao mikasika ny fifanindrian’ny faritra misy solika sy etona amin’ny faritra anaty ranomasina voaaro sy marefo, dia azo antoka ny asa mifandraika amin’ny fandinihana ny lafiny sismika (mikasika ny horohoron-tany) fa hisy fiantraikany ratsy eo amin’ny tontolo voajanahary sy maha-olona any amin’ny faritra voakasika, indrindra fa amin’ny biby, anisan’izany ireo biby mampinono monina anaty ranomasina. Ny fampivoarana sy ny famokarana etona sy solika kosa dia vao maika hampitombo ny fandefasana etona miteraka fihafanan’ny tany izay anisan’ny antony lehibe amin’ny nahatonga an’i Madagasikara ho firenena fahatelo eto an-tany voa mafy indrindra noho ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetrandro.
Ankoatr’izany, manontani-tena izahay momba ny fototra ara-joridika hiorenan’ny fanomezana ireo fahazoan-dàlana, noho ny fahafantarana fa tsy mbola vita ny fanavaozana ny Fehezan-dalàna momba ny Solika 96-018 izay natomboka tamin’ny taona 2008. Raha ny tokony ho izy dia ny Fehezan-dalàna mikasika ny Solika no mamaritra ny foto-kevitry ny lalàna. Ny fepetra mety ilàna fanitsiana na fanamboarana amin’ny fotoana ilaina izany mba hifanaraka amin’ny zava-misy kosa (toy ny fomba fitantanan-draharaha, ny vola haloa amin’ny fanjakana, sns) dia fehezin’ny didim-panjakana. Saingy hatramin’ny fananganana ity Fehezandalàna momba ny fitrandrahana Solika tamin’ny taona 1996 ity, dia iray sady tokana ny didim-panjakana fampiharana nivoaka, dia ny didim-panjakana faha-97-740 momba ny « titra » mikasika nyharena ankibon’ny tany.
Ny fahavononana sy fahamaikana asehon’ny OMNIS sy ny Governemanta dia mampitombo ny ahiahy manoloana ny tsy fisian’ny fepetra ara-dalàna sy ara-pitantanana sahaza, ary ao anatin’ny toe-draharahampirenena ara-politika sy ara-drafitra izay azo antoka fa hisy fanovàna ato ato eo anivon’ny governemanta sy
ireo andrim-panjakana voakasiky ny raharaha.
Noho ireo zava-manahirana rehetra ireo, ny fikambanana avy amin’ny firaisamonim-pirenena izay manao sonia ity Fanambaràna ity dia manao antso avo sady maika amin’ny Ministera misahana ny harena ankibon’ny tany sy ny solika, ary ny OMNIS sy ireo manampahefana mahefa rehetra :
Mba hampitsahatra ny fanentanana momba ny fanomezana titra amin’ireo faritra 44 misy solika sy etona voatonona etsy ambony ;
Hanohy ny atrikasa isam-paritra nokasaina hatao nanomboka ny volana marsa 2017 niaraka tamin’ireo solontenan’ny sehatra ara-panjakàna sy tsy miankina, ny manampahefana any ifotony, ny olom-boafidy sy ny firaisamonim-pirenena, mba hanatanterahana sy hamaranana ny fanitsiana ny Fehezan-dalàna momba ny Solika sy ireo didim-panjakana fampiharana azy amin’ny fomba manaja marina ny fampandraisana anjara ny rehetra sy ny tsy fisian’ny fanavakavahana ;
Hanamafy ny mangarahara momba ny toetoetr’ireo faritra 44 misy harena ankibon’ny tany arateknika sy ara-siantifika, ireo fepetra takiana sy maso-tsivana ampiasaina amin’ny fanomezana titra amin’izy ireo, ary koa ny vokatry ny fandalinana natao talohan’ny nanokafana ny tsingerin’ny fanomezana alàlana (licences) ka nahatongavana amin’izao fanandratana azy izao ;
Hanao fifanakalozana sy fakàna hevitra samihafa miaraka amin’ireo mpandray anjara rehetra amin’io sehatra io, anisan’izany ireo mpanjono madinika sy ireo fokonolona monina amorondranomasina voakasik’izany, mba hahazoana antoka ny fahazoana ny faneken’izy ireo aminkahalalahana mialohan’ny hisian’ny fikarohana sy fitrandrahana solika sy etona any an-dranomasina ao amin’ny faritra manodidina an’i Morondava, miainga amin’ny fahalalàna feno ny lafiny rehetra mombaan’izany. .
Antananarivo, faha-27 novambra 2018 (dikateny natao ny faha-3 desambra 2018).
- Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy